Unoona Sei Zvapupu zvaJehovha? Inzwa chokwadi kubva kwavari
“Ndava nemakore ndichizivana naMike. Anopinda chechi yeZvapupu zvaJehovha. Asi handinzwisisi chitendero chake. Ndiani anonzi Jehovha? Sei Zvapupu zvaJehovha zvisingapemberere mazororo? Mike akazvipinza mukachechi kasinganzwisisiki here?”—Becky, California, U.S.A.
“Vavakidzani vangu pavakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha ndainetseka kuti: ‘Zita rekuti Zvapupu zvaJehovha rinorevei? Haritombonzwisisiki!’”—Zenon, Ontario, Canada.
“Ini nemudzimai wangu takafunga kuti Zvapupu zvaJehovha zvakauya kuzotiparidzira nokuti zvaiziva kuti taitonetsekawo kuti tainge tisisaendi kuchechi. Machechi makuru ainge asinganamati sezvataifungira, saka takafunga kuti kapoka aka kasinganzwisisiki keZvapupu zvaJehovha kakangofananawo nemachechi iwayo.”—Kent, Washington, U.S.A.
“Ndaisatomboziva dzidziso dzavo uye kuti ivo vaiva vanaani.”—Cecilie, Esbjerg, Denmark.
Unogona kunge wakavaona vachiparidza paimba neimba, kana kuti munzvimbo dzinowanika veruzhinji, vachipa vanhu mabhuku anotsanangura Bhaibheri, uye vachikumbira kudzidzisa vanhu Bhaibheri vasingabhadharisi. Zvimwe wakapiwa magazini ino nemumwe wavo. Asi unogona kunge uchiri kunetseka kuti Zvapupu zvaJehovha vanhu vakaita sei chaizvo. Pamwe maonero ako akangofanana neevanhu vari pamusoro apa.
Kana uchinetseka nemibvunzo yakadaro, ungawana kupi mhinduro? Ungaziva sei zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha, mawaniro avanoita mari yekuti vaite basa ravo uye yekuvaka nzvimbo dzavo dzekunamatira? Sei vachiuya kuzokuparidzirai kumba kwenyu uye kuti sei vachiedza kutaura newe munzvimbo dzinowanika veruzhinji?
Cecilie ambotaurwa anoti, “Ndinoverenga zvakawanda pamusoro peZvapupu zvaJehovha paIndaneti. Ndainzwa zvimwe zvaitaurwa nezvavo, uye ndainzwa vanhu vakawanda vachivashora chaizvo. Izvi zvakaita kuti ndisatombofarire Zvapupu zvaJehovha.” Asi akazotaura neZvapupu zvaJehovha uye akawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yake.
Unoda here kuwana mhinduro dzechokwadi dzemibvunzo yako pamusoro peZvapupu zvaJehovha? Tinokukurudzira kuti utaure neZvapupu zvaJehovha nokuti ndizvo zvinonyatsoziva chokwadi. Ndizvo zvinobudisa magazini ino. (Zvirevo 14:15) Tinovimba kuti nyaya dzinotevera dzichakubatsira kuti uzive nezvedu, zvatinotenda, uye basa redu rekuparidza.